ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဖိတ်ကြားချက် - Worldwide Church of God Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2018-04 > ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမှဖိတ်ကြားလွှာ
လူတိုင်းတွင်အမှားအမှန်နှင့်ပတ်သက်သောအကြံဥာဏ်ရှိကြသည်။ လူတိုင်းသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အယူအဆအတိုင်းပင်အမှားတစ်ခုခုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ “ မှားယွင်းစွာပြုမိခြင်းသည်လူသားဖြစ်သည်” ဟုလူသိများသောစကားတစ်ခွန်းကဆိုသည်။ လူတိုင်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုစိတ်ပျက်စေတယ်၊ ​​ကတိပေးတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုစိတ်ထိခိုက်စေတယ်။ လူတိုင်းအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်။
ဒါကြောင့်လူတွေကဘုရားသခင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ သူတို့သည်ကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌မရပ်နိုင်ကြောင်းသိသောကြောင့်သူတို့သည်တရားစီရင်ရာနေ့ကိုမလိုချင်ကြပါ။ သူတို့ကသူ့စကားကိုနားထောင်သင့်တယ်၊ သင်ရှက်ကြောက်ပြီးအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ သူတို့ရဲ့ကြွေးမြီကိုဘယ်လိုပြန်ရနိုင်မလဲ။ စိတ်ကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲ “ ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်ဘုရားသခင့်ဂုဏ်တော်ဖြစ်သည်” ဟုသော့ချက်စကားလုံးဖြင့်နိဂုံးချုပ်ထားသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ခွင့်လွှတ်တယ်။
လူအများတို့သည်ထိုစကားကိုသိကြသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်လုံလောက်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ မင်းကအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေတုန်းပဲ။ သူတို့သည်ဘုရားသခင့်အသွင်အပြင်နှင့်တရားစီရင်ရာနေ့ကိုကြောက်ရွံ့ဆဲဖြစ်သည်။
သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အရင်၌ထင်ရှားခဲ့သည်။ သူသည်အပြစ်စီရင်ရန်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲကယ်တင်ရန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူကခွင့်လွှတ်ခြင်းသတင်းစကားကိုယူဆောင်လာပြီးကျွန်မတို့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့အာမခံချက်နဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံခဲ့တယ်။
သခင်ယေရှု၏သတင်းစကားသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်၏သတင်းတရားဖြစ်သည်၊ အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရသူအားလုံးအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်နှင့်လူသားတစ် ဦး ၌ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဒဏ်ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ်၏ g ၀ ံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ရန်စိတ်နှိမ့်ချသူအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသည်။ ကျနော်တို့ဒီသတင်းကောင်းလိုအပ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်၏ g ၀ ံဂေလိတရားသည်စိတ်ငြိမ်သက်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအောင်မြင်မှုတို့ကိုရရှိစေသည်။
စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိတရား၊ သတင်းကောင်းသည် ခရစ်တော်ဟောကြားခဲ့သော ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။ တမန်တော်များသည် အလားတူ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောခဲ့သည်– ယေရှုခရစ်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံ ((1. ကောရိန္သု 2,2) ခရစ်ယာန်များအတွက် ယေရှုခရစ်၊ ဘုန်းကြီးခြင်းမျှော်လင့်ချက် (ကောလောသဲ 1,27) သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်နှင့် လူသားများအတွက် ရွေးနှုတ်ခြင်းသတင်းစကား။ ဤသည်မှာ သခင်ယေရှုဟောကြားခဲ့သော ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။
“ယောဟန်သည် အကျဉ်းချခံရပြီးနောက်၊ ယေရှုသည် ဂါလိလဲပြည်သို့ ကြွလာ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် အချိန်ကာလစေ့ပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ နောင်တရပြီး နောင်တရပြီး ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ပါ။" (မာကု 1,14”၁၅)။ သခင်ယေရှုယူဆောင်ခဲ့သော ဤဧဝံဂေလိတရားမှာ “သတင်းကောင်း”—အသက်ကိုပြောင်းလဲစေပြီး ပြောင်းလဲစေသည့် တန်ခိုးကြီးသောသတင်းစကားဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိတရားသည် ယုံကြည်သူများနှင့် ဘာသာပြောင်းသူများသာမက၊ အဆုံးတွင် ငြင်းပယ်သူအားလုံးကို စိတ်ပျက်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိတရားသည် “ယုံကြည်သူအားလုံးကို ကယ်တင်သောဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ဖြစ်သည်” (ရောမ 1,16) ဧဝံဂေလိတရားသည် လုံးဝခြားနားသောအဆင့်တွင် အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ သတင်းကောင်းမှာ ခရစ်တော် ကြွလာသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုံးစုံသော အမွေဥစ္စာကို စောင့်ကြိုနေပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိဖြစ်နိုင်သည့် တက်ကြွသောဝိညာဉ်ရေးအမှန်တရားဆီသို့ ဖိတ်ခေါ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် ဧဝံဂေလိတရားကို “ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရား” ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။1. ကောရိန္သု 9,12).
“ဘုရားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရား” (ရောမ ၁5,16) နှင့် "ငြိမ်သက်ခြင်းဧဝံဂေလိတရား" (ဧဖက် 6,15) သခင်ယေရှုနှင့် စတင်ကာ၊ ခရစ်တော်၏ ပထမဆုံးကြွလာခြင်း၏ စကြဝဠာ အဓိပ္ပါယ်ကို အာရုံစိုက်ပြီး ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ပတ်သက်သော ဂျူးတို့၏အမြင်ကို ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလာပါသည်။ ယုဒပြည်နှင့် ဂါလိလဲပြည်၏ ဖုန်ထူသောလမ်းများပေါ်တွင် လှည့်လည်သွားခဲ့သော ယေရှုသည် ယခု ရှင်ပေါလုက “ဘုရားသခင်၏လက်ျာတော်ဘက်၌ထိုင်၍ တန်ခိုးနှင့်အုပ်စိုးတော်မူသော ခရစ်တော်တည်းဟူသော ထမြောက်တော်မူသောခရစ်တော်” (ကောလောသဲ၊ 2,10) ပေါလု၏အဆိုအရ၊ ယေရှုခရစ်၏သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ဧဝံဂေလိတရားတွင် “ပထမ” လာပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အစီအစဥ်ရှိ အဓိကဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည် (1. ကောရိန္သု ၁5,1စာ-၁၁)။ ဧဝံဂေလိတရားသည် ဆင်းရဲသားများနှင့် အဖိနှိပ်ခံများအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ သမိုင်းတွင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ အဆုံးတွင် တရားသည် အာဏာမဟုတ်၊ အောင်ပွဲရလိမ့်မည်။
အဆိုပါထိုးထိုးလက်သံချပ်ကာလက်သီးကျော်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ မကောင်းသောအရာသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏လမ်းတော်သို့လမ်းလွဲသွားသည်။ ၎င်းမှာခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်။
ပေါလုသည် ကောလောသဲမြို့သားများထံ ဧဝံဂေလိတရား၏ ဤရှုထောင့်ကို အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်– “အလင်း၌ သန့်ရှင်းသူတို့၏ အမွေခံခြင်းအတွက် သင့်အား အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေတော်မူသော ခမည်းတော်အား ဝမ်းမြောက်စွာ ကျေးဇူးတင်ရှိကြလော့။ မှောင်မိုက်တန်ခိုးမှ ငါတို့ကို ကယ်နှုတ်တော်မူပြီး၊ ငါတို့သည် ရွေးနှုတ်ခြင်းတည်းဟူသော အပြစ်လွှတ်ခြင်းဟူမူကား၊ ငါတို့သည် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသော သားတော်၏နိုင်ငံတော်၌ ငါတို့ကို ထားတော်မူ၏။” (ကောလောသဲ၊ 1,12 နှင့် ၁၄)။
ခရစ်ယာန်အားလုံးအတွက်၊ ဧဝံဂေလိတရားသည် ပစ္စုပ္ပန်အဖြစ်မှန်နှင့် အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသော ခရစ်တော်၊ သခင်သည် အချိန်နှင့်အမျှ၊ အာကာသနှင့် ဤနေရာတွင် ဖြစ်ပျက်သမျှအရာအားလုံးသည် ခရစ်ယာန်များအတွက် ချန်ပီယံဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်သို့ ချီမြှောက်ခြင်းခံရသောသူသည် အလုံးစုံသော တန်ခိုးအာဏာ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည် (ဧ3,20-21) ။
သတင်းကောင်းမှာ ယေရှုခရစ်သည် သူ၏မြေကြီးအသက်တာတွင် အတားအဆီးတိုင်းကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်၏လမ်းသည် ခက်ခဲသော်လည်း ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ အောင်ပွဲခံသောလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုသည် ဧဝံဂေလိတရားကို အတိုချုပ်အားဖြင့် အကျဉ်းချုံးနိုင်သည်– “လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော ယေရှုခရစ်မှတပါး သင်တို့တွင် အဘယ်အရာကိုမျှ မသိနိုင်ဟု ငါထင်၏” (1. ကောရိန္သု 2,2).
ယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်၌ထင်ရှား လာ၍ ospelဝံဂေလိတရားကိုထက်သန်စွာဟောပြောသည့်အခါသူသည်အဖြေတစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ထံမှအဖြေတစ်ခုကိုလည်းသူမျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရန်ယေရှု၏ဖိတ်ကြားချက်သည်အချည်းနှီးမဖြစ်ခဲ့ချေ။ ယေရှု၏ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုခေါ်ယူခြင်းသည်ရောမအုပ်စိုးမှုအောက်၌ခံစားခဲ့ရသောတိုင်းပြည်ကိုထိုင်။ သတိပြုမိစေသည့်အထင်ကရနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အံ့ဖွယ်အမှုများဖြင့်လိုက်ပါခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုယေရှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ယေရှုခေတ်မှဂျူးများသည်ဒါဝိဒ်နှင့်ရှောလမုန်ခေတ်၏ဘုန်းအသရေကိုပြန်လည်ထူထောင်မည့်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ကိုစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။ အောက်စ်ဖို့ဒ်ပညာရှင် NT Wright မှရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်းသခင်ယေရှု၏သတင်းစကားသည် "နှစ်ဆသောတော်လှန်ရေး" ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာသူသည်ဂျူးတို့၏စူပါစတားသည်ရောမထမ်းပိုးကိုစွန့်ပစ်ပြီးလုံးဝကွဲပြားသောအရာအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်မည်ဟုလူကြိုက်များသောမျှော်လင့်ချက်ကိုယူခဲ့သည်။ liber ၀ ံဂေလိတရားအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မျှော်လင့်ချက်ကိုသူသည် ၀ ိညာဉ်ရေးကယ်တင်ခြင်း၏သတင်းစကားအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
"ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် နီးပြီ၊ သူပြောနေပုံရသည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် သင်စိတ်ကူးထားသည့်အရာမဟုတ်ပေ။" ယေရှုသည် မိမိ၏သတင်းကောင်းကြောင့် လူတို့ကို ထိတ်လန့်စေခဲ့သည်။ “အများတို့သည် ရှေ့ဦးစွာသောသူမူကား၊ နောက်ဆုံးသောသူမူကား အရင်ဖြစ်လိမ့်မည်။” (မဿဲ ၁ ကော9,30).
အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်မှစ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကို မြင်သောအခါ၊ သင်တို့သည် နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံရသော်လည်း၊3,28).
ကြီးမြတ်သောညစာစားပွဲသည် လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည် (လုကာ ၁4,16စာ-၂၄)။ တပါးအမျိုးသားများကိုလည်း ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ တစ်စက္ကန့်သည် တော်လှန်သူမဟုတ်ပေ။
ဤနာဇရက်ပရောဖက်သည် တရားမဲ့သူများအတွက် အချိန်များစွာရှိသည် - နူနာစွဲသူများနှင့် ချိနဲ့သောအခွန်ခံများအထိ - နှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရောမဖိနှိပ်သူများကိုပင် မုန်းတီးနေပုံရသည်။ သခင်ယေရှုဆောင်ခဲ့သော သတင်းကောင်းသည် ကိုယ်တော်၏သစ္စာရှိတပည့်တော်များပင် မျှော်လင့်ခြင်းအားလုံးကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေသည် (လု 9,5၁-၅၆)။ အနာဂတ်တွင် သူတို့စောင့်မျှော်နေသောနိုင်ငံတော်သည် သူ၏လုပ်ငန်းတွင် တက်ကြွစွာတည်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ယေရှု အထပ်ထပ်အခါခါပြောခဲ့သည်။ အထူးဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုပြီးနောက် “ဘုရားသခင်၏လက်ချောင်းများအားဖြင့် နတ်ဆိုးများကို ငါနှင်ထုတ်လျှင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် သင်တို့ဆီသို့ရောက်ပြီ” ဟုပြောခဲ့သည်။ (လုကာ၊ 11,20) တစ်နည်းဆိုရသော် သခင်ယေရှု၏ဓမ္မအမှုတော်ကို မြင်သူများသည် အနာဂတ်၏ပစ္စုပ္ပန်ကို မြင်ကြသည်။ အနည်းဆုံး နည်းလမ်းသုံးသွယ်ဖြင့် ယေရှုသည် လက်ရှိမျှော်လင့်ချက်များကို ဇောက်ထိုးပြောင်းပြန်သည်-
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် သန့်ရှင်းသောဆုကျေးဇူးဖြစ်သည်—အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေသောဘုရားသခင်၏အုပ်စိုးမှုဖြစ်သည်ဟူသောသတင်းကောင်းကို ယေရှုသွန်သင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် “သခင်ဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်နှစ်” ကို စတင်ခဲ့သည်။ (လု 4,19; ဟေရှာယ ၆1,1စာ-၂)။ သို့သော် အင်ပါယာသို့ “ဝန်ခံသည်” ဟူသည်မှာ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ သူတောင်းစားများ၊ ဆိုးသွမ်းသော ကလေးများနှင့် နောင်တရသော အခွန်ကောက်သူများ၊ နောင်တရသော ပြည့်တန်ဆာများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ပြင်ပလူများဖြစ်သည်။ သိုးမည်းများနှင့် ဝိညာဉ်ရေးအရ ပျောက်ဆုံးသွားသော သိုးများအတွက်၊ သူသည် သူ့ကိုယ်သူ သိုးထိန်းဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် နောင်တရခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ထံ လှည့်သွားလိုသူများအတွက်လည်း ယေရှု၏ သတင်းကောင်းလည်း ရှိပါသည်။ စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် နောင်တရသော ဤအပြစ်သားများသည် “ဝေးဝေးဝေးဝေးနေ” သောအခါတွင် သွားလာနေသော သားသမီးများအတွက် မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကို ရှာဖွေပေးသော ရက်ရောသောဖခင်ကို ဘုရားသခင်၌ တွေ့ရှိလိမ့်မည် (လုကာ ၁၊5,20) ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည် “ဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်၌ အပြစ်ရှိသောသူကို သနားတော်မူပါ။” (လုကာ ၁)၊8,13) ဘုရားသခင်သည် သနားကြင်နာသော ကြားနာမှုကို တွေ့ရှိမည်ဟု စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ထင်မြင်သည်။ အမြဲတမ်း။ “တောင်းလျှင် ပေးလိမ့်မည်။ ရှာလျှင်တွေ့လိမ့်မည်။ ခေါက်လျှင်ဖွင့်လိမ့်မည်” (လု 11,9) လောက၏လမ်းစဉ်များကို ယုံကြည်ပြီး လှည့်စားသူများအတွက် ဤသတင်းသည် သူတို့ကြားနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးသတင်းဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှု၏ g ၀ ံဂေလိတရားကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသော်ငြားလည်းသခင်ယေရှုယူဆောင်လာသည့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏အောင်ပွဲကိုဘာမျှမတားဆီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒီအင်ပါယာဟာခါးသီးပြီးမဆုတ်မနစ်သောခုခံနိုင်မှုကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာသဘာဝလွန်ခွန်အားနဲ့ဘုန်းအသရေကိုအောင်နိုင်လိမ့်မယ်။
ခရစ်တော်က သူ၏တပည့်များအား “လူသားသည် မိမိဘုန်းအသရေနှင့် ကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့သည် ကြွလာသောအခါ၊ ဘုန်းကြီးသောပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူ၍၊ လူအပေါင်းတို့သည် ရှေ့တော်၌ စုဝေးကြလိမ့်မည်။ သိုးထိန်းသည် သိုးတို့ကို ဆိတ်နှင့်ခွဲသကဲ့သို့ အချင်းချင်း ခွဲတော်မူလိမ့်မည်။” (မဿဲ ၂။5,31-32) ။
ယေရှု၏သတင်းကောင်းသည် "ယခုဖြစ်နေပြီ" နှင့် "မဖြစ်သေး" အကြားတွင် ပြင်းထန်သောတင်းမာမှုတစ်ခုရှိသည်။ နိုင်ငံတော်၏ ဧဝံဂေလိတရားသည် ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏အုပ်ချုပ်မှုကို ရည်ညွှန်းသည်- "မျက်စိကန်းမြင်၍ ခြေမစွမ်းသောသူသည် လမ်းလျှောက်တတ်၏။ နူနာစွဲသောသူတို့သည် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏၊ နားပင်းသောသူတို့သည် ကြားကြကုန်၏၊ သေလွန်သောသူတို့သည် ထမြောက်ကြကုန်၏။ ဆင်းရဲသောသူတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြ၏" (မဿဲ၊ 11,5).
သို့သော်အင်ပါယာသည်၎င်း၏ပြည့်စုံသောပြည့်စုံချက်သည်ဆက်လက်တည်ရှိဆဲဟူသောသဘောမျိုးဖြင့်ရှိသေးသည်။ theဝံဂေလိတရားကိုနားလည်ခြင်းဟူသည်ဤအချက်နှစ်ချက်ကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်ဘုရင်၏လူမျိုးတော်၌နေထိုင်ပြီးကတိထားရာပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း၊
ခရစ်ယာန်သာသနာပြု ပေါလုသည် ဧဝံဂေလိတရား၏ ဒုတိယမဟာလှုပ်ရှားမှုကို စတင်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်—၎င်းသည် သေးငယ်သောယုဒပြည်မှ ပထမရာစုအလယ်ပိုင်း၏ ယဉ်ကျေးမှုကြီးသော ဂရိ-ရောမကမ္ဘာအထိ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်များကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူအဖြစ် ပြောင်းလဲသူ ပေါလုသည် နေ့စဉ်အသက်တာ၏ ပရမတ်အားဖြင့် ဧဝံဂေလိတရား၏ မျက်စိကွယ်သောအလင်းကို ညွှန်ပြသည်။ ဘုန်းကြီးတော်မူသော ခရစ်တော်ကို ချီးမွမ်းသောအခါ၊ ဧဝံဂေလိတရား၏ လက်တွေ့ကျသော အကျိုးဆက်များနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ အယူဝါဒဆန့်ကျင်မှုများကြားမှ ပေါလုသည် ယေရှု၏အသက်၊ အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အဓိပ္ပာယ်ကို အခြားခရစ်ယာန်များအား ဤသို့ပြောပြသည်– “တစ်ချိန်က တစ်ပါးသူနှင့် ရန်လိုသောအကျင့်ဆိုး၌ ရန်စပြုခဲ့သော သင်တို့သည်လည်း ယခုတွင် သူ၏သေခြင်း၏သေခြင်းမှ ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်ပေပြီ။ သန့်ရှင်း၍ အပြစ်မရှိ၊ သင်သည် ယုံကြည်ခြင်း၌သာ တည်ကြည်၍ ခိုင်ခံ့မြဲမြံစွာ တည်နေလျှင်၊ သင်တို့သည် ကြားနာပြီး ကောင်းကင်အောက်ရှိ သတ္တဝါအပေါင်းတို့အား ဟောကြားထားသည့် ဧဝံဂေလိတရားကို မျှော်လင့်ခြင်းမှ မလွှဲမရှောင်ဘဲနေလျှင်၊ ငါပေါလုသည် သူ၏ကျွန်ဖြစ်ပြီ။” (ကောလောသဲ၊ 1,21နှင့် ၂၃)။ ပြန်လည်သင့်မြတ်သည်။ စင်းလုံးချော။ ကျေးဇူးတော်။ ကယ်တင်ခြင်း ခွင့်လွှတ်ပါ။ အနာဂတ်၌သာမက ဤနေရာနှင့် ယခုပင်။ ပေါလု၏ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ၊ Synoptics နှင့် John တို့သည် စာဖတ်သူတို့ကို ခေါ်ဆောင်သွားသည့် အထွတ်အထိပ် (ယောဟန် ၂၀:၃၁) သည် ခရစ်ယာန်တို့၏ နေ့စဉ်အသက်တာအတွက် ဧဝံဂေလိတရား၏ အတွင်းစွမ်းအားကို အခမဲ့ဖြစ်စေသည်။ ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ဧဝံဂေလိတရားကို အတည်ပြုသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ပေါလုက၊ ဝေးကွာသောယုဒပြည်၌ ထိုအဖြစ်အပျက်များသည် လူအပေါင်းတို့အား မျှော်လင့်ချက်ပေးသည်– “ဧဝံဂေလိတရားကို ငါမရှက်ပါ။ ရှေးဦးစွာ ယုဒလူများနှင့် ဂရိလူတို့ကို ကယ်တင်သော ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ အ​ကြောင်း​မူ​ကား၊ ယုံ​ကြည်​ခြင်း​မှ​လာ​သော​ဘု​ရား​သ​ခင်​ရှေ့​တော်​၌ ခိုင်​လုံ​သော​ဖြောင့်​မတ်​ခြင်း​ကို​လည်း​ကောင်း ပေါ်​လွင်​စေ​တော်​မူ​၏။” (ရောမ 1,16-17) ။
တမန်တော်ယောဟန်သည် ဧဝံဂေလိတရားတွင် အခြားရှုထောင့်တစ်ခုကို ထပ်လောင်းသည်။ “ချစ်တော်မူသောတပည့်” သည် ယေရှုကို မည်သို့ပြသခဲ့သည် (ယော ၁9,26)၊ သိုးထိန်းနှလုံးသားရှိသူ၊ ကြောက်ရွံ့ရိုသေသောလူများကို နက်ရှိုင်းစွာချစ်မြတ်နိုးသော ချာ့ခ်ျခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို သတိရမိသည်။
“ယေရှုသည် ဤစာအုပ်၌မရေးထားသော အခြားသော နိမိတ်လက္ခဏာများစွာကို တပည့်တော်များရှေ့၌ ပြုတော်မူ၏။ ယေရှုသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်း၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် နာမတော်၌အသက်ရှင်ရမည်အကြောင်း၊ သင်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းရှိစေခြင်းငှာ၊ ဤအရာတို့ကို ရေးထားလျက်ရှိသည်" (ယော၊ ၂၀း၃၀-၃၁)။
ယောဟန်၏ on ၀ ံဂေလိတရား၏ကိုယ်စားပြုမှုသည်“ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ရန်” ဟူသောထူးခြားသောဖော်ပြချက်တွင်အဓိကကျသည်။ ယောဟန်သည် personal ၀ ံဂေလိတရား၏အခြားရှုထောင့်တစ်ခုကိုအံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်ဖော်ပြသည် - ယေရှုခရစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနီးကပ်စွာဆက်သွယ်ချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ယောဟန်သည်မေရှိယတည်ရှိခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းကိုဖော်ပြထားသည်။
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တန်ခိုးကြီးသော လူထုတရားဟောဆရာဖြစ်တော်မူသော ခရစ်တော်ကို တွေ့ကြုံရသည်။ (ယော 7,37စာ-၄၆)။ ယေရှုကို နွေးထွေးပျူငှာစွာ မြင်သည်။ သူ၏ဖိတ်ကြားချက်မှ "လာကြည့်!" (ဂျိုဟန် 1,39) သံသယရှိသောသောမတ်စ်အား သူ၏လက်တွင် ဒဏ်ရာများဖြင့် လက်ညှိုးထိုးရန် စိန်ခေါ်ခြင်းအထိ (ယော ၂၀း၂၇)၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် လူဖြစ်လာပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင် နေထိုင်ခဲ့သူကို မမေ့နိုင်သောနည်းဖြင့် ပုံဖော်ထားသည် (ယောဟန်၊ 1,14).
လူတွေက ယေရှုကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုကြပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့အတွက် သူနဲ့ တက်ကြွစွာ ဖလှယ်ကြတယ်။ (ယော 6,5၈)။ တူညီတဲ့ပန်းကန်ထဲက စားသောက်ရင်းနဲ့ သူ့ဘေးမှာ အိပ်နေကြတယ်။3,23စာ-၂၆)။ သူ့ကို အရမ်းချစ်ကြတာတွေ့တာနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ကြော်ထားတဲ့ ငါးအတူတူစားဖို့ ကမ်းစပ်ကို ရေကူးပြီး1,7-14) ။
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့်၊ သူ၏စံနမူနာနှင့် ကိုယ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော ထာဝရအသက်ကို ဧဝံဂေလိတရားမည်မျှ လည်ပတ်နေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးသည် (ယောဟန်၊ 10,10).
ဧဝံဂေလိတရားဟောရန် မလုံလောက်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးသည်။ ငါတို့လည်း အသက်ရှင်ရမယ်။ တမန်တော်ယောဟန်နက်စ်က ကျွန်ုပ်တို့အား အားပေးသည်– ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်းကို ဝေမျှရန် ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာမှ အခြားသူများကို အောင်မြင်နိုင်သည်။ ရေတွင်းမှာ ယေရှုခရစ်ကိုတွေ့တဲ့ ရှမာရိအမျိုးသမီးက (ယော 4,27စာ-၃၀) နှင့် မာဂဒလမာရိ (ယော ၂၀:၁၀-၁၈)။
လာဇရု၏သင်္ချိုင်းဂူတွင်ငိုကြွေးသူသည်တပည့်များ၏ခြေကိုဆေးပေးသောနိမ့်ကျသောကျေးကျွန်ယနေ့တိုင်အသက်ရှင်နေဆဲဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ၏ရောက်ရှိခြင်းကိုပေးသည်။
“ငါ့ကိုချစ်သောသူသည် ငါ့စကားကို စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။ ငါ့ခမည်းတော်သည် သူ့ကိုချစ်၍ ငါတို့သည် သူ့ထံသို့လာ၍ သူနှင့်အတူ အိပ်ကြလိမ့်မည်..။ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်။” (ယော ၁။4,23 နှင့် ၁၄)။
ယနေ့ ယေရှုသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သူ၏လူတို့ကို တက်ကြွစွာ ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ သူ၏ဖိတ်ကြားချက်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အားတက်စရာဖြစ်သည်- "လာကြည့်ကြ!" (ဂျိုဟန် 1,39).